हार्जाडको मूल्य सुनेर तर्सियो रियल मड्रिड, रोनाल्डोको विकल्प को ? - NepaliGoal.com
Home » अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल » हार्जाडको मूल्य सुनेर तर्सियो रियल मड्रिड, रोनाल्डोको विकल्प को ?
Milan Shahi जुलाई 29, 2018 अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल Leaveacomment 1,663 Views
रियल मड्रिडका प्रशिक्षक लुजन लोपेटेगुई इडेन हार्जाडलाई नकिन्ने मनस्थितीमा पुगेका छन् । स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस गएपछि रियलले हार्जाड किन्ने तयारी गरेपनि चेल्सीले विश्वकिर्तिमानी रकम २०० मिलियन पाउण्ड माग गरेपछि रियल हार्जाड किन्न पछि हटेको हो ।
स्पेनिस पत्रिका एएसका अनुसार रियल हार्जाड किन्ने अभियानबाट बाहिर निस्किएको हो । स्पेनका पूर्व प्रशिक्षक लोपेगुईले इस्को र मार्को एसेन्सियोलाई महत्वपूर्ण खेलाडीकारुपमा अघि बढाउने बताइएको छ । लोपेटेगुई इस्कोका ठूला प्रसंशक हुन् । इस्कोको प्रतिभा ’bout लोपेटेगुई जानकार छन् ।
रियलले रोनाल्डोको विकल्पकारुपमा पेरिस सेन्ट जर्मेनका नेयमार र केलियन एमबाप्पेलाई समेत भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । तर दुवै खेलाडीले पिएसजी नछोड्ने बताइसकेका छन् ।
Previous आर्सनलसँग पिएसजी ५-१ ले पराजित (भिडियोसहित)
Next साफ फुटबलको तयारीमा रहेको खेलाडी होस्टेल छाडेर डिस्कोमा